“အတွေးစလေးတွေ”: စနစ်ကျတဲ့ စနစ်ကောင်း . . .
Posted by Han Kyi at 6:00:00 am
ခုတလော ဖတ်ရတဲ့ ပို့စ်တွေထဲ ဒီပို့စ် အကြိုက်ဆုံးပဲ ဦးဟန်ကြည်ရေ ... ။
ကျမလဲ အဲဒါမျိုး ကြုံဖူးတယ်။ ၈၈ အရေးအခင်းမှာ လမ်းပေါ် လူတွေထွက် ဒီမိုကရေစီ အော်နေကြတော့ အိမ်မှာ လက်တိုလက်တောင်း ကူညီလုပ်ကိုင် ပေးနေတဲ့ တိုင်းရင်းသူ ကလေးမလေး ကြားပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ဒီမိုကရေစီ ရောက်လာတယ်။
သူလဲ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်သတဲ့။ ဘာတုန်း ဒီမိုကရေစီ နင်သိလို့လား ဆိုတော့ ... သိဘူးလေ၊ လူတွေတောင်းနေတော့ ကောင်းလို့ နေမှာပေါ့တဲ့၊
ကျမမှာ ရယ်ရအခက် ငိုရအခက် ... ။
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး .... စတဲ့ဟာတွေ မသိဘဲ မိရိုးဖလာ ရှိခိုးဆုတောင်းလို့ လိုက်တောင်းနေသူတွေလဲ ဒီခေတ် ကြီးထဲ အများသား ဆရာဟန်ရေ ... ။
ဆရာတော်တပါး ဟောသွားတဲ့ တရားထဲကလို ...
အပါယ်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ .... (အလယ်ကဟာတွေ မသိတော့လို့ ကျော်ချပြီး) ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား လို့ မဆိုရင်ဘဲ တော်လှပြီ။
တရားစီရင်ရေး၊ ပညာရေးစနစ်နဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ အမြင်ကို သိချင်တယ်ဗျာ ... တက်ဂ်ပို့စ် ပုံစံ လုပ်လိုက်ပါ ကျနော်ပါ သိသလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ရေးမယ်လေ ...
22 February 2012 at 10:28
ဦးဟန်ကြည်ရေ.. ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. စဉ်းစား၊ တွေးခေါ်၊ ချင့်ချိန်တတ်ဖို့ သိပ်လိုတာဗျ... သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်နေရင်တော့... ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးလေ... ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး အတွေးတွေများရတယ်ဗျာ....
အဲလိုယောင်ကောင်းတိုင်းယောင် အော်ကောင်းတိုင်းအော်နေတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးမို့ မြင်ပြင်းကတ်လွန်းလို့ ဖဘမှာဘာမှတောင်မရေးတာဘဲဆြာကြည်ရေ..
ကြောက်ပါရဲ့ဗျာ အတွေးတွေလဲအများကြီးဆိုသလို ဒီမိုကရေစီဆိုတာလဲဘာမှန်းမသိပါဘူး
ကိုအောင်ပြောတဲ့ စိတ်ကူးမျိုး ကူးဖူးသဗျ...
ဒါပေမယ့် တဂ်က အလေးကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မလုပ်ဘဲ နေမိတာ...သူများကို အလုပ်ပိုအောင်လုပ်သလိုဖြစ်မှာလည်း စိုးရိမ်နေလို့...အခုလို ကိုအောင်က တိုက်တွန်းတော့လည်း လုပ်ပါ့မယ်...အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ကြိုက်တယ် ဆရာ အရေး အသားရော အကြောင်းအရာ ရော ပေးသွားတဲ့ မက်ဆေ့ကို ရောပေါ့။ဆရာပြောပြတဲ့ ကြောင်း အရာလေးတစ်ခုကို အထူးသဘောကျပါတယ်..ဒီမိုကရေစီ ရလာရင်လူသတ်လို့ ရပြီလားဆိုတဲ့..လူပိန်း အတွေးလေးကိုပေါ့။ အတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်...အင်း..ဒီလိုလူမျိုးတွေလက်ထဲကို ဒီမိုကရေစီ ထည့်ပေးလိုက်လို့ ကတော့ မျောက်လက်ထဲ စတင်းဂန်း ထည့်ပေးလိုက်တာကမှ သက်သာအုံးမယ်..။
ကောင်းတယ်ဆရာ။ ဒီမို ကရေစီ ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိပဲ လက်ထဲ ရလာတာထက် သိပြီးမှ လက်ခံကြတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ရုပ်မြင်သံကြား မီဒီယာကနေ လွှင့်ဖို့မရဲလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ်မှာတင်မက ဖြစ်နိုင်ရင် ပြည်တွင်းစာစောင်တွေကနေ ဆောင်းပါးအဖြစ်ရေးသင့်ပါတယ်...
တဘက်တလမ်းကလဲ အများပြည်သူတွေကြား ပျံ့နှံ့လွယ်မဲ့ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှု့လေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ပါပေးလား ဆရာရေ။
ဆရာ့လို လူမျိုးတွေ နဲနဲချင်းစီ စပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရင် ခရီးရောက်နှုန်း ပိုမြန်သွားနိုင်တယ်လို့ ယုံပါတယ်ဆရာ။
ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ကြာလာတော့လည်း ကိုယ့်နားတွေကိုတောင် ပိတ်ထားချင်လာတယ်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)ရဲ့ အဆိုကိုပါ ထောက်ခံသွားတယ် ဆရာ။
ဖတ်ရတာ အနှစ်သာရ ရှိပါဘိဗျာ။
လက်နှီးစုတ် ဥပမာလေး ထိမိလွန်းလှရဲ့။
နောက်ဆက်တွဲ ပို့စ်မှာလည်း ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း ဥပမာတွေနဲ့သာ ဆက်ချပါ ဆရာဟန်ရေ။ အားပေးပါတယ်။
အတွေးပွားစေတဲ့ ပို့ စ်လေးပါ ဆရာဟန်ရေ..ဆရာဟန် ညွန်းတဲ့ စာအုပ်ကို ပိတ်ရက်မှာ ဖတ်ဦးမယ်..နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုးလေး ညွှန်းပါဦးဗျ...
အဲ...27ရက်နေ့ မှာ အမြည်းလာစားဦးနော်...
ိပ်မက်လာမက်ပေးတဲ့အတွက်ရော ဒီက ကျွန်တော်
ဆရာရေ ဒီမိုကရေစီစိတ်ထား ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေး ဖတ်ချင်လိုက်တာ။ ခုရေးထားတာလည်း ကြိုက်လွန်းလို့ လာဖတ်တာ နှစ်ခေါက်တော့ အနည်းလေးရှိပြီ။
ဆရာအဆင်ပြေတဲ့အခါ ကောက်နုတ်ပေးမယ့် ဖတ်ညွှန်းကဏ္ဍ ကိုစောင့်ဖတ်ပါ့မယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ညွှန်ပြချက်လေးဗျာ။ မှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဦးဦးဟန်ကြည်ရေ . . .
ဥပမာလေးတွေနဲ့တကွ ရေးပြထားတာ ကောင်းတယ်ဗျာ
ကိုဟန်ကြည်ရေ- ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Project က Schedule က အရမ်းကျပ်နေတာနဲ့ ပို့စ်လည်း မတင်နိုင်သလို ဘလော့လည်ဖို့လည်း မနည်းကြိုးစားနေရတယ်ဗျာ။ အခုမှရောက်တော့တယ်။ တောင်းပန်ပါရဲ့ဗျာ။ ဒီပို့စ်ကိုလည်း သဘောကျမိပါရဲ့။ အနှိပ်ခန်းသွားဖို့ဆိုတဲ့ ဥပမာကိုတော့ သဘောကျလှသဗျာ။ ဒီမိုကရေစီဘာလဲလို့ပြောရင် ကျွန်တော်တော့ မပြောတတ်လှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၄ခုနှစ်တုန်းက ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကို နယူးဒေလီနဲ့ ကာလကတ္တားကိုရောက်ခဲ့ဖူးတော့ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းတို့၊ ဦးဝိစာရအ၀ိုင်းတို့လို အ၀ိုင်းတွေပေါ်မှာ ဖဲထိုင်ရိုက်နေတာ၊ နောက်ပြီးသူတို့ဆီက အိမ်ခြံစည်းရိုးအုတ်နံရံတွေပေါ်က အပေါ့သွားထားတဲ့ သေးစီးကြောင်းတွေမြင်ရတာ၊ အဲဒါတွေကြည့်ပြီး ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါမျိုးလားလို့တွေးမိဖူးပါရဲ့။ တလောက ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပြန်ခဲ့ရမှာလား ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် သီချင်းတက်ဆိုသွားတဲ့ကိစ္စက ဒီမိုကရေစီတောင်မရသေးဘူးနော်။ နောက်ဆို စင်ပေါ်တက်ဆဲချင်ဆဲတော့မှာ။ ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင် ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း လူတွေမှာ စည်းကမ်းတော့ရှိဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ ကိုဟန်ကြည်ပြောတဲ့စာအုပ်တော့ မဖတ်ဖူးဘူးဗျ။ လုပ်ပါဦး။ ညွှန်းပါဦး။
ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပတ်က အလုပ်များနေတာနဲ့ ဒီပို့စ်အဆက်ကို လက်စမသတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ...စာအုပ်ဖတ်ညွှန်းကို အမြန်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်...လောလောဆယ်တော့ အရင်ကတည်းက ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို အလျင်မပြတ်အောင် တင်ပေးနေဖြစ်တာမို့ ခဏလောက်တော့ သည်းခံပေးဖို့ တောင်းပန်ပါရစေဦးဗျား...